Home Wararka Puntland oo daandaansi ku tilmaantay safarkii wasiirada Somaliand ee gobolka Sool (Daawo)
Puntland oo daandaansi ku tilmaantay safarkii wasiirada Somaliand ee gobolka Sool (Daawo)
Wasiiro katirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa gaarey deegaamo katirsan gobolka Sool, waxaana ay la kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada deegaamadii ay booqdeen oo ay kamid tahay Laascaanood. Kulamadaas ayaana ay shacabka ku gaarsiiyeen fartiimo ay ka wadden xukuumada Soomaaliland.
safarka wasiirada ayaa ku soo adat Xilli ay weli taagan tahay xiisadda colaadeed ee u dhexaysa Puntland iyo Somaliland isla markaana ay ciidanka labada dhinac isku horfadhiyaan Tukaraq ayaa waxaa gobolka Sool gaarey wasiiro Somaliland katirsan.
Dowlada Puntland ayaa daandaansi ku tilmaantay safarka Wasiiradda xili ay jirto dareen colaadeed.
Safarka wasiirada halkaan ka daawo:
Previous articleRW Itoobiya oo dhambaal u diray shacabka Yamen
Next articleKismaanyo oo lagu qabtay shir looga arinsanayo dagaalka ka dhanka ah Alshabaab (Sawiro)
Dagaal xoogan oo u dhexeeyay A-Shabaab iyo Ciidanka Dowlada oo ka...